Marwada R/wasaaraha oo deeq gaarsiiyay barakacayaasha dagan dagmada Wadajir – idalenews.com
Marwada R/wasaaraha dalka ayaa maanta gaarsiiyay deeq dhar ah qoysaska Barakacayaasha ah ee ku jira Kaamka Cadaala ee ku yaala dagmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Deeqdan dharka ah ee maanta loo qeybiyay qoysaska ku nool kaamka Cadaala ee degmada Wadajir ayaa waxa u ka koobnaa dharka Dumarka iyo Busteyaal loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamkaasi islamarkaana ahaa dad ugu baahan deeqdaasi.
Guddoonsiinta deeqdan la siiyay dadkaasi tabaaleysan ayaa waxa gaarsiiyay xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi oo ah marwada R/wasaaraha dalka oo ay wehliyeen xubno ka mid ah ururada haweenka.
Xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in deeqdani dharka ah ay ugu talagashay haweenka barakacayaasha ah ee ku nool kaamkaasi.
Marwada R/wasaaraha dalka Xildhibaanad Caasho Xaaji ayaa sidoo kale ku boorisay haweenka Soomaaliyeed in ay ka dhiidhiyaan gabood falada loo geysanayo haweenka oo ay ka mid tahay kufsiga, xilli madaxda ugu sareyso dalka ay go’aanno adag ka soo saareyn tacadiyada loo geysanayo dumarka.
Deeqdan dharka ah ay maanta gaarsiisay Marwada R/wasaaraha Soomaaliya qoysaska barakacayaasha ah ee ku jira Kaamka Cadaala ee ku yaala dagmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa mujineyso sidii ay mas’uuliyiinta dalka ugu heelan yihiin garab istaaga shacabka ay matalaan.
Nin Chinese ah oo Aduunka Baaskiil kusoo maray oo gaaray Soomaaliya + SAWIRRO